PP-R mapaipi uye zvigadzirwa zvakavakirwa pane yakasarudzika copolymerized polypropylene seyakanyanya mbishi zvinhu uye inogadzirwa zvinoenderana GB / T18742. Polypropylene inogona kukamurwa kuita PP-H (homopolymer polypropylene), PP-B (block copolymer polypropylene), uye PP-R (zvisina kujairika copolymer polypropylene). Do ...
Pombi dzePVC dzinotora pombi dzePVC-U dzemadhiraini, ayo akagadzirwa ne polyvinyl chloride resin seyakanyanya mbishi zvinhu Izvo zvinowedzerwa nezvinodiwa zvekuwedzera uye zvinoumbwa kuburikidza nekugadzirisa extrusion. Icho chivakwa chekudonha pombi ine simba rakakwira, kudzikama kwakanaka, hupenyu hwakareba hwebasa uye mutengo wakakwira ...
1. PE yekuchera pombi Pakati peinjiniya mapurasitiki ese, HDPE ine yakanyanya kupfeka kuramba uye ndiyo inonyanya kuoneka. Iyo yakakwira iyo mamorekuru uremu, iyo inowedzera kupfeka-isingabatike iyo zvinhu iri, kunyangwe ichidarika akawanda esimbi zvinhu (senge kabhoni simbi, simbi isina simbi, bronze, nezvimwewo). Pasi pe conditi ...